Nakhu ukuthi awushiswa kanjani nge-Influencer Marketing | Martech Zone
Sike sabhala ngaphambilini mayelana nezicupho zokukhangisa ngomthelela. Njengomuntu onxephezelwa ngezikhathi ezithile njengo umthelela, Nginokungabaza ukuthi bangaki ithonya ubudlelwane bokuthengisa ukusethwa.
Ngokweqiniso, ngasekuqaleni konyaka ngamenyelwa kwi Isakhiwo sezitini ngoba ngingowasendaweni umthelela ezinkundleni zokuxhumana. Bekunenqwaba yabantu abamenyiwe kusuka kwabezindaba zenhlalo - bonke benamanani aphezulu kunjini yokushaya amagoli ethandwayo Indianapolis. Ithrekhi ihlinzeke ngamaphasi okupaka namathikithi e-suite futhi yaphuma yonke nomcimbi. Angiyanga empeleni - ngibe nengxabano ngomzuzu wokugcina.
Omunye wabangane bami wahamba wahamba wahlekisa ngokuthi, ngesinye isikhathi, umshayeli odumile wayehamba ngakubo futhi akekho noyedwa owabona lokho… kwakudingeka babuze ukuthi wayengubani ngaphambi kokuba baphonse izithombe ezithile ezinkundleni zokuxhumana. Yeka ukubhoka! Umkhankaso wethonya uphuthelwe kuwo wonke amasilinda (uyayithola?) Futhi empeleni ngazama ukuxhumana nomkhondo ngesikhathi engimenywe ngaso ukwenza isiqiniseko sokuthi abamoshi imali yabo. Akekho owake wangishayela futhi. Bengikhona nasemcimbini lapho ngicele khona isikhathi nomuntu obalulekile osiza ukuphromotha ithrekhi… naye wangixosha.
Kunezakhi ezi-3 ezithile zempumelelo isu lokukhangisa elinomthelela futhi lo mkhankaso ubaphuthele bonke:
Ingabe i izilaleli zomdlalo onethonya izilaleli ozama ukufinyelela kuzo? Ithrekhi bekungaba ngcono kakhulu ukumema abantu abanabalandeli abayi-100 abanentshisekelo yokujaha kunami onabalandeli abangama-30k engingazi ukuthi kukhona yini ukunakekelwa ngokujaha ngoba angikaze ngikhulume ngokujaha.
Ngabe bekukhona i- indaba yomgqugquzeli ongabelana ngayo nabalaleli babo lokho kuzozwakala kahle? Ukubonisa, ukudla ukudla kwamahhala, ukuphuza ubhiya, nokuya kuthrekhi mahhala akuyona indaba. Bekungaba yinto emangazayo ukuthi ithrekhi ikhulume ngokuxhumeka komndeni, umlando, abashayeli, ubuchwepheshe… ngaphandle kwezithombe zobhiya.
Ngabe bekukhona i- bizela esenzweni ukukala umthelela womkhankaso? Kulungile, ngakho-ke kungenzeka ukuthi kwaba khona i-spike ekwabelaneni ngezwi ngalolo suku ngoba bonke laba bathonya bezenhlalo bakhuluma ngeBrickyard. Haha! Ngiyadlala ngokuphelele - bekungekho spike ngoba bekuvele kukhona amakhulu ezinkulungwane zabalandeli bangempela abakhuluma ngomjaho! Laba bagqugquzeli abashintshi lutho.
Uma inhloso bekuwukuthola abantu abavela ngaphandle komlandeli ojwayelekile baye kuthrekhi, akusizanga. Angizwanga ndaba eyayiphoqa…. empeleni angizwanga lutho ngaphandle komngani wami owayehleka ngokuthola ithikithi lamahhala. Izindaba ezidinga ukuxoxwa bekufanele zihambisane nazo amasu ahambisana nesinqumo sethu sokuthenga.
Kuningi kakhulu obekungenziwa ukubamba abantu abaziphendulayo abavakashele lapho bephendule. Mhlawumbe iphamfulethi yokuba nengqungquthela yezenhlalo elandelayo kuthrekhi, mhlawumbe ikhodi yesaphulelo ongabelana ngayo nabantu mayelana nethrekhi, mhlawumbe uhlu lwama-tweets, izibuyekezo nama-ops ezithombe aye ahlanganiswa ukuze ahlanganyele nabasebenzisi ngezindaba zokuthi kungani kufanele baye kuthrekhi, imiphi imicimbi eza ngokuzayo nokuthi uwathenga kuphi amathikithi.
Uma uzokhokha noma unikeze okuthile kubathonya, qiniseka ukuthi kuzokusebenzela! Angiphikisani nokukhangisa okunomthelela nakancane, kumane nje ukuthi akulula njengokubheka abathonya kwesinye isiza bese ubaphonsa wonke amathikithi amahhala. Lokhu bekungaba ngcono kakhulu!
Tags: isitiniindiaapolis racewayithonyaukumaketha kwamathonyakloutithrekhi yomjaho